Beledweyne: Bulshada oo iska xiraya biyo-mareeno
Dadka degan xaafadaha degmada Baladweyne ee ku dhow webiga ayaa bilaabay dhismaha iyo caro-tuurka wado biyo-mareen noqotay oo ku taal barriga magaalada. Wadadan oo Laanta Tiimbo la yiraa ayaa bohol noqotay, iyadoo biyaha buuraha magaalada ku dhow iyo kuwo webiga kasoo rogmada ku fatahisa xaafadaha barriga ee Baladweyn. Dhismaheeda ayaa qeyb ka ah dedaal dadka deegaanku uga gaashaamanayaan daadadka laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobka deyrta ee bilowda bisha Oktoobar.
Lacag dhan shan kun oo doolar ayaa ku baxeysa dhismaha iyo carro-tuurka wadadan oo dadka degan xaafadaha ku dhow ay horey u barokici-jireen xilliyada webigu biyo badan keeno ama ay da’aan roobab daadad wata. Lacagtan waxaa laga ururiyay ganacsatada iyo bulshada deegaanka. “Qof walba oo degan xaafadahan wuxuu ku tabarucaa dhaqaalaha uu awoodo. Ganacsataduna garab weyn bay noo yihiin,” ayuu yiri Cumar Daahir oo ka mid ah u qeybsanayaasha howshan.
Xaliimo Xuseen oo muddo afar iyo toban sanno ah degan xaafada Kooshin oo ka mid ah deegaanada sida weyn ay wadadan biyaha ugu deyso ayaa sheegtay in carro-tuurka jidka Laanta Tiimbo inay uga maarmayaan barokaca ay ku qasbanaayeen xilliyada roobabka xoogan iyo daadadku ay jiraan. Waxa ay Raadiyoow Ergo u sheegtay in sidoo kale wadadu u noqon karto marrin ay ku baxsadaan haddii jihooyin kale ay daadad uga yimaadaan xaafada. “Markii hore dadku ma aysan heli karin jid ay ku baxsadaan oo carruurta iyo dadka aan tabarta laheyn iyo xoolahuna go’doon bay geli jireen xitaa haddii ay biyaha ka badbaadaan,” ayey tiri Xaliimo.
Weriyaha Raadiyoow Ergo ee Baydhabo wuxuu sheegayaa in xaafadan si joogta ah ay biyaha webiga iyo roobkuba ugu soo rogmadaan, iyagoo nolosha dadka halis geliya, guryana dumiya. Daadadkii ugu dambeeyay ayaa xaafada Kooshin ku rogmaday bishii April ee sanadkan oo roob aan xooganeyn uu da’ay. Xoolo iyo guryo dhowr ah ayuu la tagay roobkaas oo dadka xaafadana barakici yahay. “mararka qaar wadada biyo ayaa xira oo baabuur gurmad ah xitaa nooma imaan karin,” ayey tiri Xaliimo. Saddex sanno kahor, daadad isla xaafadaas kusoo rogmaday ayaa dilay 12 qof oo ay ka mid ahaayeen carruur iyo dad waayeel ah.